SAMSUNG WT16J8LEC/XST Semi Auto, 16Kg Washing Machine – unique.com.mm
UNiQUE မှ ပြုလုပ်သော အထူးအရောင်းမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်များကို လက်မလွတ်တမ်း သတင်းရယူရန်၊ နောက်ဆုံးပေါ် ထုတ်ကုန်သစ်များအကြောင်း နှင့် ထုတ်ကုန်များအတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသုံးသပ်ချက် ဆောင်းပါး ဗီဒီယိုများ လက်ခံရရှိရန်အတွက် မှတ်ပုံတင်ထားရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
If you can't find the product you want, please contact us at 09-452244100.
Call us (+959)-45 2244 100
View All Notebook
>> Acer Notebook
>> ASUS Notebook
>> DELL Notebook
>> HP Notebook
>> Lenovo Notebook
>> Apple Macbook
>> ROG Gaming Notebook
>> MSI Gaming Notebook
>> Huawei Notebook
Branded Desktop PC
View All Mobile
>> Apple iPhone
>> Samsung Mobile
>> Huawei Mobile
>> Oppo Mobile
>> Vivo Mobile
>> Mi Mobile
>> realme Mobile
>> Honor Mobile
>> Apple iPad
>> Samsung Tablet
>> Huawei Tablet
>> Huion Drawing Tablet
Air Conditioner (လေအေးပေးစက်)
Washing Machine (အဝတ်လျှော်စက်)
Air Cooler (ရေငွေ့ဖြင့် လေအေးပေးစက်)
Vacuum Cleaner (ဖုန်စုပ်စက်)
Insect Killer (ပိုးမွှားဖမ်းစက်)
Hair Dryer (ဆံပင်ခြောက်သွေ့စက်)
Water Dispenser (ရေပူ၊ ရေအေးစက်)
Electric Kettle (ရေနွေးခရား)
Toaster (ပေါင်မုန့် မီးကင်စက်)
Microwave (လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းသုံး မီးဖို)
Rice Cooker (ထမင်းပေါင်းအိုး)
Induction Cooker (လျှပ်စစ်မီးဖို)
All categories All categories10000mAh Power Bank3 Pin Adapter3 to2pin AdapterAdapterAir ConditionerAir CoolerAir FryerAir Pods ProAir PurifierAir Purifier FilterAir Vent Magnetic Phone MountAirpodAirpods 2AnitechApple 5W USB Power AdapterApple iPad Pro Magic KeyboardApple iPad Pro Smart Folio KeyboardApple Magic Mouse 2Audio AdapterAutomatic Water SaverBaseusBeverage CoolerBlenderBluetooth KeyboardBluetooth SpeakerBody ScaleBox FanBox Fan With HumidifierBrush IronCar ChargerCar HolderCar Mount HolderCasingChargerCharging AdapterCharging CableChest FreezerChopperChromecastClothes DryerCoffee MakerCooling Table FanDeep FryerDehumidifierDesk FanDesktop HeaterDigital Pressure CookerDishwasherDisinfecting MachineDistance MeterDrawing TabletDual USB Universal AddapterDVD PlayerEarPhoneEarpods with Lighting ConnectorElectric Air PotElectric GrillElectric HeaterElectric KettleElectric OvenElectronic OvenEVD PlayerExternal Hard DiskExternal SSDFacial Cleansing and MassageFacial Ionic CleansingFacial Ionic SteamerFast ChargerFloor FanFly & Mosquito KillerFly KillerFood ProcessorFreezerFry PanGaming HeadsetGas CatridgeGas PipeGas RegulatorGas StoveGoProGopro Protective HousingGrillGrill and HotpotGrill PanGrill PlateHair ClipperHair DryerHair StylerHeadphoneHeadphonesHome TheaterHomePod MIniHumidifierHumidifier Stand Fani MaciMacInduction CookerINFRA CookerInfrared CookeriPadiPad Pro Magic KeyboardiPad Pro Smart KeyboardiPhone3Pin Original Adapteriphone earpodsiPhone Original AdapterIronJuicerKitchen AppliancesLaptop StandLighting to Digital AV AdapterLighting to VGA AdapterLighting USB Charger SetLightning Cable and ChargerLightning Faster Charger SetLightning USB ChargerLightning Wall Charger SetMacbookMacbook AdapterMeat MincerMi BoxMicro Charger & Cable SetsMicro Faster Charger SetMicrowaveMicrowave OvenMicrowave With GrillMidea Vertical Disinfecting CabinetMini FanMist FanMixerMobile Phone AccessoriesMobile Phone TripodMosquito KillerMosquito SwatterMultiMulti CookerNew MacbookNotebookOnline UPSOvenPanPhone StandPortable Air ConditionerPower BankPower Delivery ChargerPower SupplyPressure CookerProjectorQuick ChargerRefrigeratorRice CookerRouterRunning PadSandwich MakerScooterShaverSmart BandSmart BikeSmart PhoneSmart WatchSmartphoneSony AudioSound BarSpeakerSpeakersSpin ExtractorSSDStand FanStand HeaterStand MixerSterilizer CupboardStraightenerSuki PotTable FanTable GrillTabletTea Tray SetThermometerToasterToaster OvenTouch PenTower FanTravel AdapterTravel ChargerTravel USB ChargerTVType C AdapterType C Cable and ChargerType C ChargerType C Faster Charger SetType C PD Power AdapterType C USB ChargerType-C Car ChargerType-C ChargingUniversal ChargeUPSUSB C to Digital AV AdapterUSB C to VGA AdapterUSB ChargerUSB ChargingUSB Multi AdapterUV Germicidal LampUV sterilizarUV SterilizerVacuum CleanerWall ChargerWall FanWashing MachineWater DispenserWater HeaterWater PurifierWebcamWifi RepeatorWireless ChargerWireless Fast ChargerWireless SpeakerWorld Travel Adapter
Spend K100,000 more and get free shipping!
SAMSUNG WT16J8LEC/XST Semi Auto, 16Kg...
SAMSUNG WT16J8LEC/XST Semi Auto, 16Kg Washing Machine
If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at onlinesales@unique.com.mm.
We only replace items if they are defective or damaged. If you need to exchange it for the same item, send us an email at onlinesales@unique.com.mm and send your item to: UNiQUE Commercial Co., Ltd., No 41, Kabaraye Pagoda Road, Bahan Township, Yangon 11201, Myanmar (Burma).
To return your product, you should mail your product to: UNiQUE Commercial Co., Ltd., No 41, Kabaraye Pagoda Road, Bahan Township, Yangon 11201, Myanmar (Burma)
ယူနစ်ကို ၂၀၀၄ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် စတင်တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှ စတင်၍ “Delivering exceptional customer experiences through reliable services - ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် ထူးခြားကောင်းမွန်သော ဝယ်ယူမှုအတွေ့အကြုံများ ပေးအပ်မည်” ကို အဓိကတန်ဖိုးထားမှုစံနှုန်းအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။
ဝယ်ယူအားပေးသူမိတ်ဆွေများ၏ လိုအပ်ချက် အကြံပြုချက်များကို အစဉ်တစိုက်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့ရာ ယနေ့အချိန်အခါတွင် ရန်ကုန်မြို့တွင် ဆိုင်ခွဲ (၇) ဆိုင်၊ မန္တလေးမြို့တွင် ဆိုင်ခွဲ (၂) ဆိုင် စုစုပေါင်း ဆိုင်ခွဲ (၉) ဆိုင်တွင် ဝန်ထမ်းပေါင်း ၅၀၀ ကျော်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဝန်ဆောင်မှုအကောင်းဆုံး၊ ရောင်းအားအကောင်းဆုံးနှင့် ပစ္စည်းအစုံလင်ဆုံး ကွင်းဆက်လက်လီဆိုင်များအဖြစ် ရပ်တည်နေပါသည်။
ယူနစ်၏ ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သည့် “The One Stop Partner for Your Digital Lifestyle - သင့်ရဲ ဒီဂျီတယ်လူနေမှုဘဝပုံစံအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော အဖော်မွန်” ဆိုသည့်အတိုင်း ကွန်ပြူတာ၊ မိုဘိုင်းဖုန်း၊ အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး နှင့် ခေတ်မှီ ဒီဂျီတယ်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတို့ကို တစ်နေရာထဲတွင် အစုံလင်ဆုံး ဝယ်ယူရရှိနိုင်အောင် ရောင်းချပေးနေပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် Lifetime Service Warranty (တစ်သက်တာ လက်ခမဲ့ ပြင်ဆင်ခွင့်) ကို ပထမဦးဆုံးပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ဖွင့်လှစ်သမျှ ဆိုင်ခွဲတိုင်းတွင် Service Center ကိုထည့်သွင်းပေးထားပြီး After Sales ဝန်ဆောင်မှုရယူနိုင်ရန် အထူးအလေးပေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားသောကြောင့် UNiQUE ၏ မည်သည့်ဆိုင်ခွဲများမှ ဝယ်ယူထားသည်ဖြစ်စေ စမတ်ဖုန်း နှင့် တက်ဘလက်များအား Application နှင့် HD Game များထည့်သွင်းပေးခြင်း၊ Desktop နှင့် Notebook များအား Window တင်ပေးခြင်း၊ Microsoft Office စသည့် ရုံးလုပ်ငန်းသုံးဆော့ဝဲလ် များတင်ပေးခြင်း အစရှိသည့် Software နှင့် သက်ဆိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများကို မိမိနှင့်နီးစပ်ရာ ဆိုင်ခွဲများတွင် တစ်သက်တာလက်ခမဲ့ပြင်ဆင်ခွင့်ဖြင့် ဝင်ရောက်ရယူနိုင်ပါသည်။
UNiQUE မှ ပြုလုပ်သော အထူးအရောင်းမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်များကို လက်မလွတ်တမ်း သတင်းရယူရန်၊ နောက်ဆုံးပေါ် ထုတ်ကုန်သစ်များအကြောင်း နှင့် ထုတ်ကုန်များအတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသုံးသပ်ချက် ဆောင်းပါး ဗီဒီယိုများ လက်ခံရရှိရန်အတွက် မှတ်ပုံတင်ထားရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
Powered by UNiQUE Team